सरकारद्वारा विदेशमा डिप्लोमा अध्ययनमा जानमा रोक – कन्सलटेन्सीहरु आक्रोशित – Akhabar Post : Daily Online News From Nepal
उच्च-शिक्षा अध्ययनका लागि नेपालबाट बर्षेनी हजारौको संख्यामा विद्यार्थीहरु विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा जाने गर्दछन। विदेशमा अध्ययनका लागि नेपालबाट विविध प्रक्रियाहरु पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ । जस मध्ये नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रमाणीकरण शाखाले हरेक विद्यार्थीलाई एन.ओ.सी. आर्थात “नो अब्जेक्सन लेटर” दिने एउटा प्रक्रिया छ । यहि, जेठ २८ गतेबाट विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरु मध्ये ब्रिजकोर्ष, भासा तथा डिप्लोमा मात्र अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुलाई एन.ओ.सी. नदिने भएको छ ।
के हो त वास्तवीकता ?
२०७३ मा नेपालको नयाँ संबिधान बन्यो, त्यहि अनुरुप हरेक क्षेत्रमा एन, कानुन, नियम नयाँ बने, तथा परिमार्जन् समेत भएका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा समेत यो क्रम चलेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा छात्रवृत्ति ऐन २०७३ को संसोधन भएको छ । त्यसैगरी कक्षा/तहहरु समेत परीवर्तन् भएका छन् । जसमा, कक्षा १० सम्मको शिक्षालाई मध्यामिक् तह भनिन्थ्यो भने कक्षा ११-१२ र त्यो भन्दा माथि लाई उच्च-शिक्षा भनिन्थ्यो । तर, अहिले आएर कक्षा १२ सम्मको तहलाई मध्यामिक तह अर्थात ‘स्कुल शिक्षा’ भानिन्छ ।
कानुनतः प्रमाणीकरण शाखाले उच्च शिक्षाका लागि विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरुका लागि मात्र एन.ओ.सी. दिने प्रावधान रहेको छ । तसर्थ माध्यामिक तह, कक्षा १२ आर्थात बोलीचालीको भासामा (+2) पास गरेपछि उच्च-शिक्षा आर्थात स्नातक, स्नातकोत्तर, अनुसन्धान र पी.एच.डी. लगायतको तहको अध्ययनमा जानेलाई मात्र एन.ओ.सी. प्राप्त हुन्छ ।
सम्बन्धित निकायको बिचार:
यसै विषयमा कुरा गर्दा प्रमाणिकरण शाखाका उपसचिव महेश्वर शर्माले बताउनु भयो : स्कुल लेबलमा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीहरुलाई एन.ओ.सी. नदिने ऐन कानुन छ । जो अहिले लागु भएको हो । अहिले +2 समेत स्कुल लेबलमै पर्छ । उच्च-शिक्षाका लागि एन.ओ.सी. दिई रहेको छ । ब्रिज कोर्स, भासा, भोकेसनल कोर्स लगायतको डिप्लोमाका लागि मात्र चाहि एन.ओ.सी. नदिने नियम छ । तर उच्च-शिक्षाका लागि बिदेसमा रहेका विश्वबिध्यालयमा एप्लाई गरेपश्चात विद्यार्थीलाई सपोर्टको रुपमा भाषा तथा अन्य ब्रिजकोर्स आवस्यक पर्ने देखिएमा एन.ओ.सी. उपलब्ध हुन्छ । जसमा विद्यार्थीहरुले आफुले पढ्न चाहेको विश्वबिध्यालयबाट ब्रिजकोर्सको आवस्यकता सम्बन्धि सिफारिस पत्र भने उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ ।
त्यसगरी, यसै विषय उपर शैक्षिक परामर्सदाताहरुको छाता संगठन नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ ईक्यानका उपाध्यक्ष देवीदास भट्टराईको विचार यस्तो छ: डिप्लोमा पनि उच्च शिक्षाको प्रथम खुड्किलो भएकोले यसलाई रोक लगाउनु उचित होइन । हामीले यस विषयमा मन्त्रालय संगको छलफलमा अहिले सम्म डिप्लोमाको लागि पैसा बुझाईसकेका विद्यार्थीहरुलाई एन.ओ.सी. दिन आग्रह गरेका छौ ।
यस घटनाबाट मुलभूत रुपमा चिन र जापानी भासा शिक्षा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थी तथा तिनका अभिभावक र अस्ट्रेलियामा भेट कोर्समा कलेज जान चाहने विद्यार्थीहरुलाई असर परेको पाइन्छ । त्यसैगरी यी विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुलाई शैक्षिक परामर्श सेवा दिने कन्सल्टेन्सीहरु माथि यसको ठुलो मार परेको देखिन्छ । फलस्वरूप कन्सल्टेन्सीहरु ब्यवसाय संचालनमा नै समस्या देखिने भनेर आक्रोशित भएको पाइयो ।
हालको अवस्थामा भने ब्रिज कोर्स तथा भासा शिक्षा अध्ययनका लागि मात्र भनेर एप्लाई गरेका विद्यार्थी तथा अभिभावकहरु अन्योलमा रहेको देखिन्छ । विद्यार्थीहरु प्रमाणीकरण शाखा सम्म धाउदै एन.ओ.सी. प्राप्त नभएपछि रित्तै फिर्दै गरेको अवस्था छ । बिदेशी कलेज , नेपाल सरकार, परामर्शदाता लगायत यसका सबै सरोकारवालाहरु समयमा नै सजक रहदै प्रक्रियामा रहेका विद्यार्थीको तत्काल उचत ब्यबस्थापन गर्नु पर्ने देखिन्छ।
प्रमाणीकरण शाखाबाट एन.ओ.सी. प्राप्तिको पछिल्लो तथ्यांक चाट:
भक्तपुर नगरपालिकाले दिदैछ प्रमाणपत्र धितोमा शैक्षिक कर्जा